बिरामी सरकारी अस्पतालमा परीक्षण निजी ल्याबमा
२०७६ कार्तिक २५ सोमबार ०८:१०:००
ल्याब परीक्षणमा कर्मचारीको सेटिङ, ८० प्रतिशत बिरामीसँग निजी ल्याबको रिपोर्ट
सरकारी अस्पतालमै उपलब्ध रगत परीक्षणका लागि पनि यहाँका निजी ल्याबमा पठाउने गरेको पाइएको छ । केही निजी ल्याबसँगको सेटिङमा यस्तो हुने गरेको बिरामीको गुनासो छ । भरतपुर अस्पतालमा उपचाररत अधिकांश बिरामीको फाइलमा भरतपुरका नाम चलेका निजी ल्याबका रिपोर्ट भेटिने गरेका छन् । सरकारी अस्पतालमै उपलब्ध सामान्य परीक्षणका लागि पनि बिरामीलाई निजी ल्याबमा पठाउने गरेको पाइएको छ । डेंगु र स्क्रब टाइफसको परीक्षणका लागि पनि निजी ल्याबमा पठाउने गरिएको छ ।
भरतपुर अस्पताल पुगेका बिरामी त्यहाँ कार्यरत ल्याब कर्मचारीकै सल्लाहमा परीक्षणका लागि एनआरएल, आइआरएल, आरडिएल, सिआरएललगायत निजी ल्याबमा पुगेको देखिन्छ । अस्पतालका विभिन्न वार्डमा शुक्रबार र आइतबार गरिएको नमुना सर्वेक्षणमा ती निजी ल्याबको रिपोर्ट पाइएको छ । ८० प्रतिशत बिरामीसँग निजी ल्याबका रिपोर्ट भेटिएका छन् । आरडिएल र केही ल्याबमा सरकारी अस्पतालकै ल्याब र अन्य कर्मचारीको समेत लगानी छ । त्यहाँ सरकारी अस्पतालमा समेत काम गर्ने केही कर्मचारी कार्यरत छन् ।
‘स्वैच्छिक हिसाबले कोही बिरामी अस्पतालबाहिरका ल्याबमा गएर सेवा लिनु स्वाभाविक हो, तर अस्पतालकै ल्याब र नर्सिङ स्टेसन इन्चार्जको मिलेमतोमा अधिकांश बिरामीको परीक्षण निजीमा हुने गरेको छ,’ एक नर्सले भनिन् । ल्याबमा काम गर्ने कर्मचारीको मिलेमतोमा अस्पतालले दिन सक्ने सेवाका लागि पनि निजीमा पठाउने गरिएको उनले बताइन् । ‘निजी ल्याबमा पठाउन डाक्टरहरूले कमै मात्र जोड गर्छन्,’ एक कर्मचारीले भनिन्, ‘बढी भूमिका ल्याबकै कर्मचारीको हुन्छ । सेटिङ मिलाउन नर्सिङ इन्चार्जको पनि हात छ ।’
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट भन्छन्– समस्या थाहा छ, नियमन गर्न सकेको छैन
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. श्रीराम तिवारीले समस्याबारे आफू जानकार रहेको तर नियमन गर्न नसकेको बताए । उनले कमिसनको लोभमा निजी ल्याबमा परीक्षण गराउन पठाउने गरेको पाइएको बताए । ‘अधिकांश बिरामीसँग निजी ल्याबमा परीक्षण भएको रिपोर्ट भेटिन्छन् । हाम्रै अस्पतालमा हुने परीक्षणसमेत निजीमा भएको देख्दा अचम्म लागिरहेको छ,’ मेसु डा. तिवारीले भने, ‘परीक्षणका लागि बाहिर पठाउनुमा केही कमिसनको पनि खेल हुन्छ, बाँकी कुरा तपाईं आफैँ खोजेर लेख्नुस्, मैले भन्न मिल्दैन ।’
ल्याब परीक्षणमा सिविसी गणना सामान्य मानिन्छ । तर, भरतपुर अस्पतालमा यो सेवा दिन कति समय लाग्छ भनी सोद्धा ल्याबमा कार्र्यरत एक कर्मचारीले तीन घन्टासम्म लाग्ने बताए । लगत्तै आरडिएल ल्याबमा पुग्दा आधा घन्टाभित्र सेवा दिन सकिने जवाफ पाइयो । सरकारी अस्पतालमा हुने ढिलासुस्तीले पनि कतिपय बिरामी परीक्षणका लागि निजीमा जाने गरेका छन् । यसमै मिलेमतो हुने गरेको अस्पतालकै कर्मचारी बताउँछन् । ‘ल्याबमा कार्यरत कर्मचारीले रिपोर्ट आउन ढिला हुन्छ भन्छन् । कतिपय त यहाँ हुँदैन नै भन्छन् । त्यसपछि सेवाग्राही निजीमा जान बाध्य हुन्छौँ,’ अस्पतालमा भेटिएका एक बिरामीका आफन्तले भने ।
#सरकारी अस्पताल # निजी ल्याब
डाक्टरहरु सरकारी अस्पताललाई सम्पर्क कार्यालय बनाउँछन, उपचार भने निजीमा गर्छन : मन्त्री ढकाल
सरकारी अस्पतालकै कर्मचारीको मिलोमतोमा विरामी निजी अस्पताल पठाइन्छ : मन्त्री ढकाल